व्यवस्थापिका संसदको बैठक मंसिर ६ गतेसम्मका लागी स्थगित
काठमाडौँ, कात्तिक २३ । मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दलहरुले व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठक पनि चल्न दिएनन् । बैठक शुरु भएको केही समय केही सांसदलाई बोल्न दिएर उनीहरुले
जातीय विभेद अन्त्यका लागी देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिदैँ
काठमाडौँ, २३ कात्तिक । बर्षौदेखि समाजमा आक्रान्त रुपमा रहेको जातीय छुवाछुत तथा विभेद अन्त्यका लागि देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । अभियान सञ्चालनका निम्ति जातीय छुवाछुत तथा विभेद अन्त्यका लागि सक्रिय
चीनबाट आइतबार साझँ थप २७ ट्याङ्कर भित्रिए
काठमाडौँ, कात्तिक २२ । चीन सरकारले नेपाललाई अनुदान दिएको पट्रोलियम पदार्थमध्ये २७ ट्याङ्कर आइतबार नेपालको उत्तरी सीमा रसुवागढीबाट भित्रिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बलका अनुसार गत १४ गतेदेखि आजसम्म ७१
मानवअधिकारद्धारा भारतीय नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रियकरण
काठमाडौं, कात्तिक २२ । भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दीले मानव अधिकार संकटमा परेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले मानव अधिकारको स्थिति पत्र आइतबार सार्वजनिक गर्दै समस्या समाधानका
साढे तीन सय औषधि बोकेका ट्रक रक्सौलमा अलपत्र !
पर्सा, कात्तिक २१। मधेस केन्द्रित दलले गरेको आन्दोलन तथा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको कारण नेपालका लागि आयात गरिएका तीनसय ट्रकभन्दा बढी औषधि सीमास्थित भारतको रक्सौलमा थन्किएका छन् । वीरगन्जको मितेरी पुलमा मोर्चाका
आइतबारको संसद बैठकमा मधेसी मोर्चा पनि !
काठमाडौँ, २१ कात्तिक । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलनका सम्पूर्ण विषयवस्तु व्यवस्थापिका–संसद्मा राख्ने भएको छ । तराई मधेस आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको र उठाइएका मागलाई सम्बोधन गर्न कुनै पहल नगरेर मुलुकलाई
पूर्वी नाका काँकडभिट्टा आज पनि ठप्प
झापा, कात्तिक २१ । पूर्वी नाका काँकडभिट्टा भएर पाँच दिनदेखि पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारीसाधन नेपाल भित्रन सकेका छैनन् । पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारीसाधन नेपाल भित्रन नसक्दा झापासहित मेची अञ्चलमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम
पर्वतमा प्लास्टिक झोला निषेधित अभियान सुरु !
पर्वत, १९ कात्तिक । पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुस्माबजारमा प्लास्टिक झोलाको प्रयोग निषेध गर्न अभियान सुरु भएको छ । पोखरामा क्रियाशील आमा नेपालको अगुवाइमा प्लास्टिक झोलाको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा परेको प्रतिकूल
आपूर्ति असहजता धेरै दिन टिक्दैन : आपूर्तिमन्त्री पुन
काठमाडौँ, १९ कात्तिक । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले आपूर्तिमा देखिएको असहजता चाँडै हट्ने दाबी गरेका छन् । उपभोक्ता हित तथा संरक्षण मञ्चसँग बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनले नाकाबन्दीले नेपालको आपूर्ति
आठ वर्षदेखि डेढ सय परिवार जङ्गलमै !
कञ्चनपुर, कात्तिक १८ । झन्डै आठ वर्षअघि कञ्चनपुरको दोदा नदीले विस्थापित गरेका शङ्करपुरका डेढ सय बढी परिवारको अझैसम्म पनि जङ्गलमै बास छ । दोदा नदीमा २०६५ सालदेखि आउने बाढीले हालसम्म शङ्कपुरका